Tawhiida Archives - Page 8 of 12 - Ibsaa Jireenyaa
July 4, 2019 Sammubani Leave a comment
Waa’ee Tawhiida ilaalchisee barruulee hanga ammaa ilaalle haala kitaabatin kunoo isiniif dhiyaatanii jiru. Linkii kana tuquun buusu dandeessu: https://sammubani.files.wordpress.com/2019/07/tawhiid-1.pdf
June 29, 2019 Sammubani Leave a comment
6ffaa- Fitnaa shahwaata fi shubahaata irraa nagaha bahu
Namni jireenya keessatti qormaata gurguddaa lamatu isa qunnama. 1ffaa- shahwaata (fedhii lubbuu)-kana jechuun fedhiin lubbuu wanta badaa isa dharraasisuudha. Hanga fedhe wanta nama balleessu fi balaa guddaa fidu haa ta’u, lubbuun isaa yoo feete wanta san guuttachuuf ni carraaqa. Ergasi, adabbii hojii isaa irraa dhalatu ni dhandhama. Fakkeenyaaf, dhiirri dubartii takka yoo jaallate fi karaa halaalatiin yoo walitti hin dhufin, yoo namni kuni Rabbiin hin sodaatin, ishii waliin waan badaa hojjachuu danda’a. ergasii isaan lamaanu adabbii hangana hin jedhamne dhandhamu. Tarii namni fedhii lubbuutiin waan machaa’eef yeroo sanitti adabbii fi miidhaan hojii badaa itti hin mul’atu. Walaleessaan akkana jedha:
Nama hawwituun maraatte nan jedhanii
Anis, jaalalli maraatuu caalaa isaaniin jedhenii
Namni jaalalaan qabamee hin dammaquu jireenya guutuu
Bar maraatan yeroma tokko tokko kan kufuu